कथा- जुना क्रमश: १० – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
जुना र चक्रपाणिको दैनिकी यसै गरि चल्दै थियो । एकं बर्ष बित्न पाएको थिएन । जुना गर्भवती भएर एउटा सुन्दर छोरा जन्माइन । सुन्दर छोराको नाम बाबुराजा राखियो । अब चक्रपानिलाई थप जिम्मेवारी थपिएको थियो । तर पनि घर उज्यालो भएको थियो । बिगतको अबस्थाबाट गुज्रिएर अलि ब्यबस्थित भएको अनुभव भएको थियो । छोरा पदम र दुर्गा बनारसबाट पण्डित बनेर आउछन भन्ने ठुलो आश गरेका थिए, उनले । कुनै खबर नगरिकन एकाएक बनारस पढन गएका छोराहरु घर आएको देखेर चक्रपाणि अचम्म परे । उनीहरु डराई डराई पिडीमा आएर बसे । चक्रपाणिले हकार्दै भने के भो तिमीहरुलाई ? तिमीहरु घर किन आयौ के पाठशाला छुट्टी भयो ? दुबैले जवाफ दिन सकेनन । बिस्तारै सानो स्वरमा पदमले भने “ बा म त नपढ़ने निर्णय गरेर घर फर्के बरु हलो कोदालो गर्छु खान्छु”, भनेर टाउको झुकाई बस्यो ।
चक्रपानिलाई रिस त उठेको थियो, एक चटकन गालामा हान्दिउ भनेर । फेरी आफै खैचिए । अनि कान्छो तैले के गरिस । बिचैमा कान्छोले भनो बा कर्मकाण्डी गर्न सम्म भए, तर यो शास्त्री आचार्य भन्ने कुरा पढने आटै आएन । त्यहि भएर घरको पनि नियाश्रो लाग्यो । जोगिको खिचडी खाएर अरु बसेर पढन त म सकिन । उनीहरु बिचैमा पढाइ छोडेर घर आए । फेरी हकार्दै दुवै छोरालाई सम्झाए, तिमीहरुले पढाइ नछोड, केहि दिन घर बसेर फेरी आश्रम बिद्यालय गएर पढाइ पुरा गर्यौ भने मात्रै तिमीहरुको जीवन सुध्रेला, नत्र भने यहि पहाडमा घास दाउरा गरेर जिन्दगी जाने छ । छोराहरुले पाठशाला छोडेर आइसकेका थिए । उधो मन्टो लगाएर सुनिरहे । अब उनीहरु पढन नजाने नै भए ।
चक्रपानिले सोचे जस्तो छोराले गरेनन । तर पनि ति दुवै छोराहरुले कान्छी आमालाइ घरायसी कामकाजमा सघाई रहे । कुनै गुनासो थिएन । कान्छी आमाले मिठो चोखो बनाएर खुवाउथिन । छोराहरु आए पछि खेतीपाती गर्न , घाँस दाउरामा गर्न सुविधा नै भएको थियो । गाउघरमा यसरी मिलती भएर बसेको अरु कोइ थिएन । चक्रपाणि पनि दंग थिए । न छोराहरुले कुनै गुनासो गर्छन न त जुनाले नै गुनासो गर्छिन । एउटा स्वर्ग जस्तो घर बनेको थियो ।
यसै गरि समय बितिरहेको थियो । जिम्माल लक्ष्मीभक्तले आफुले पाएको जिम्मालीलाइ भरपुर सदुपयोग गरेका थिए । सबै गाउलेहरुलाई हातमा लिएका थिए, डर धाक वा लोभ जसरि पनि आफ्नै पोल्टामा पारेका थिए । भाइहरुको दाँजोमा दिनप्रतिदिन धनि हुदै गएका थिए । पुर्ख्यौली जग्गा जमिन भन्दा दशौ गुणा बढाइसकेका थिए । चक्रपानिले आफु रैती जस्तो पहिले कहिल्यै अनुभव गरेका थिएनन । किनभने आफ्नो बा बुढा जिम्माल भक्तिराम आफुसंग हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले कहिले पनि उनलाई दाजुले छुद्र व्यवहार गरेको थाहा थिएन, उनीलाई । लक्ष्मी भक्तबाट प्रभावित भएर त्यस क्षेत्रका कमान्डरले अरु दुइ गाउ समेत थपिदिएका थिए । उनले आफना दुइ अरु भाइलाई समेत साथमा लिएर आफ्नो जिम्माली चलाई राखेका थिए ।
प्रत्येक साल धान रोपाइ र धान स्याहार्ने बेलामा सम्पूर्ण गाउका मानिस आएर जिम्माल्को खेति लगाए दिने र उब्जनी स्याहार्दिने गर्दथे । त्यो पनि सित्तैमा । अब देखि चक्रपाणि पनी त्यै रैती कै दर्जामा जिम्मालको घरमा खेति लगाउन उर्दी जारि भयो । चक्रपाणिलाइ अहिलेसम्म भ्रम थियो कि म पनि जिम्मालको छोरा हुँ । म मेरो दाजुको लागि रैती हुने छैन । म त भाइ हुँ । भनेर दाजुलाई गुनासो गर्न गए । तर जिम्म्माल भनेको जिम्माल हो । त्यो सरकारी पद हो । यो उर्दी मान्ने पर्छ । भनेर दाइले भनेको सुने पछि चक्रपानिलाई चक्कर लागेर भाउन्न हुन् पुगे ।
तर पनि जिम्मालसंग बिद्रोह गर्न सक्ने अबस्था थिएन । आफ्नै धुनुखुनी लागि रहे । मनमा चिसो पसेपछि सम्बन्धमा पनि चिसो हुन् पुगेको थियो । जब अलि धेरै अपमान भएको महसुस गरेपछि चक्रपानिले जिम्मालाको घरमा खेतिपाती लगाउन जादा सबैलाई मजुरी दिनु पर्छ भनेर जोतेका हल फुकाई दिए । गरिब मान्छेको श्रम शोषण गर्न पाइदैन भने । एकाएक यस्तो काम आफ्नै भाइले गरेको देखेर जिम्माल लाइ पनी कम झोक चलेको थिएन । तर उनले भाइले ठिक भनेको हो, मैले तिमीहरुलाई मालपोत दिदा सबैलाई छुट दिन्छु भनेर मामलालाई सुल्झाए ।
चक्रपानिले गाउलेहरुका ससाना समस्याहरुलाई टारी दिन्थे । कसैको गुनासो भए झैँ झगडा हुँदा मिलाई दिने गर्दथे । गाउलेहरुको नजरमा कान्छ जिम्माल न्याय प्रेमी छन् । भन्ने गर्दथे । केहि कागज पत्र भए लेखि दिने, त्यसको सट्टा केहि लिन्थेनन । बिस्तारै कान्छो भाइलाई गाउलेले मान गर्दै गरेको देखेपछि जिम्माललाई अलि टाउको दुखाइ हुन् थालेको थियो । चक्रपानिका छोराहरुले पनि घर धन्दामा हात बढाएर सहयोग गर्दा गोठभरि दुहुना गाइ भैसी भरिए, घरमा गोरसको कमि थिएन । नुन तेल र दशौको लुगाफाटाका लागि घ्यू बेचेर मज्जाले पुग्थ्यो ।चक्रपाणि सुकीला भएर हिडन सकेका थिए ।
जब आम गाउलेको सामन्ने आफ्नै भाइले यस्तो बिरोध गरेपछि सम्बन्धमा दरार आयो । जुना पनि आफ्नी दिदि कहाँ जान बिस्तारै कम हुन् थाल्यो । चक्रपाणि त दाजु कहाँ जाने छोडे । जुनालाइ भने जे भए मैले मागेर बिहे गरिदिएको साली हौ । भाइलाई अलि सम्झाउ, भनेर भन्ने गर्थे जिम्मालले ।
जुनाले कुरा गर्न खोजे पनी हामि भाइहरुको बिचमा नबोल भनेर चुप बनाउथे । चक्रपाणिले । पदम र दुर्गाको बिहे गरेर माइत छोडेर गएका पत्नीहरुलाई ल्याउन ससुराली गए । ससुरालीमा पुगेका पदमले दुइ चार दिनमा नै बुहारी लिएर घर आए । कान्छोले भने रित्तै फर्केर आयो । कान्छीलाई अर्को हप्ता मात्रै पठाउने भए अहिलेलाइ दिन निस्केन भनेर रोकेछन । धेरै दिन बस्न पर्ने भो भनि दुर्गा घर फर्क्यो ।